Tuesday September 08, 2020 - 12:18:36 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xiisadaha siyaasadeed ee ka jira wadanka Itoobiya ayaa sii xoogeystay xilli ay xaalad bandaw ah ku jiraan qaar kamid ah gobollada wadankaas.
Gobolka Tigreega ee xuduudda la leh dalka Ereteriya ayaa ciidamo badan lagu daadiyay xilli lafilayo in berri ay ka dhacdo doorashooyin madaxtinimo oo murun badan ka taaganyahay.
Golaha baarlamaanka ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in doorashadaas ay tahay mid sharci daro ah islamarkaana aanan waafaqsaneyn dastuurka dalka Itoobiya, sidaas darteedna aanan laga qeybgali karin.
Baarlamaanka ayaa sidoo kale ku baaqay inay xukuumada Abey Axmad qaado talaabo waliba oo looga hortagi karo inay kala furfuranto Itoobiya, islamarkaana kala qeybsamaan qowmiyadaha ku nool wadanka.
Warka kasoo baxay Baarlamaanka ayaa lagu sheegay inuu go’aankan kasoo horjeedo qodobka 9aad faqradiisa 1aad ee dastuurka Itoobiya sida ay hadalka u dhigeen. Waxay sheegeen in go’aanka uu gaaray baarlamaan goboleedka Tigreyga ee sharciyeeyey doorashadaas inuu ahaa mid khalad ah islamarkaana uusan shaqeyn doonin, iyagoo dadweynaha ugu baaqay inay ka fogaadaan ka qeybgalka doorashadaasi.
Kulanka baarlamaanka ayaa la sheegay in aysan kasoo qeybgalin xildhibaanada kasoo jeeda gobolka Tigrey kuwaas oo qaadacay ka qeybgalka shirka, islamarkaana lasoo saftay qowmiyadooda iyagoo sheegay inuu gobolka xaq u leeyahay inuu ka tashto aayihiisa, laakiin hogaanka baarlamaanka ayaanan dheg jalaq u siinin maqnaanshaha xildhibaanada laga soo doorto gobolka Tigrey, islamarkaana qabsaday kulankooda.
Maamulka gobolka Tigrey ayaa isna ku adkeysanaya inay qabsoomi doonto doorashada gobolka, islamarkaana ay dadweynuhu u dareeri doonaan goobaha codbixinta taariikhdu marka ay tahay sagaalka bisha September oo ku asteysan arbacada soo socota. Getajeew Reeda oo ah afhayeenka xizbiga Tigreyga ee loo yaqaano TPLF ayaa sheegay in aysan marnaba aqbali doonin go’aanka kasoo baxay baarlamaanka.
Ninkan ayaa wakaalada wararka ee Reuters u sheegay in doorashada gobolka Tigrey ay qabsoomi doonto wax waliba oo dhaca aysan u joogsan doonin, wuxuu sheegay in cadaadis waliba oo uga yimaada xukuumada dhexe ay ka baaraan degeen, islamarkaana ujeedkooda ugu weyn uu yahay sidii ay ku qabsoomi lahayd doorashadaas iyadoo aanan dhaafin mudadii loo jaan gooyey.
Maamul goboleedka Tigreyga ayaa sidaas oo kale sheegay in isku day kasta oo lagu hor istaago doorashadaas inay la micno tahay dagaal lagu iclaamiyey qowmiyadda Tigrey, islamarkaana dagaalkaas uu saameyn doono gobol waliba oo ka mid ah Itoobiya. Waxay xukuumada uga digeen inay ku dhacdo khalad taariikhi ah oo ay ku soo duusho gobolka Tigrey, kolkaas oo ay sheegeen inay iyada qaadi doonto mas’uuliyada qofkasta oo la dilo iyo guri kasta oo uu dagaalkaas burburiyo. Wargeyska lagu magacaabo Baloom Beeg ee kasoo baxa Mareykanka ayaa sheegay in taxadiga ay lasoo banbaxeen Tigreyga uu madax-xanuun midkii ugu darnaa ku noqday ra’isul wazaaraha hadda jooga.
Ra’isul wazaaraha Itoobiya Abey Axmad ayaa guranaya miraha ka dhashay muddo kororsigii uu sameeyey kadib markii uu dib u dhigay doorashooyinkii la filayey inay dhacaan bishii August ee lasoo dhaafay uuna xilka ku kororsaday muddo sagaal bilood ah isagoo ku andacoonaya in uusan dalka awood u lahayn qabashada doorashooyinka sababo ku aadan halista cudurka covid-19.
Xukuumada Addis Ababa ayaa sanadwaliba maamulka gobolka Tigreyga siin jirtay lacag lagu qiyaasay 285 milyan oo dollar sida ku cad miizaaniyada xukuumada ee sanadkan oo cadadkeeda guud uu gaarayey 476 bilyan. Hogaamiyeyaasha iyo siyaasiyiinta Tigrey ayaa dhankooda maalin kahor dhoola tus ballaaran kusoo bandhigay gobolka, islamarkaana sheegay inay xisaabta ku darsadeen caqabad kasta oo uga imaan karta xukuumada dhexe ee Addis Ababa.
Qowmiyada Tigreyga ayaa ka mid ah qowmiyadaha tirada yar ee kunool wadanka, waxaana cadadka guud ee qowmiyadaas lagu tilmaamaa ilaa shan milyan oo ruux, taas oo mid aad u yar marka loo fiiriyo in ka badan 100 milyan oo kunool wadanka. Saddex milyan oo ruux ayaa hadda kunool gobolka Tigreyga kuwaas oo la filayo inay sagaalka bishan ka qeyb qaataan doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan gobolka sida uu sheegay gudiga doorashooyinka gobolka ee dhawaan lagu dhawaaqay.
Natiijada doorashada ayaa sidoo kale la sheegay in lagu dhawaaqi doono 13ka bisha sida uu sheegay gudiga. Doorashadan waxaa ka qeybgali doona ugu yaraan shan xizbi oo ah axzaab yaryar, balse waxaa ugu tun weyn loona badinayaa inuu ku guuleysan doono xizbiga TPLF. Hogaamiyeyaasha iyo siyaasiyiinta ugu cad-cad ee horboodaya hirgelinta doorashada waxaa ugu cadcad siyaasiyiintii ku jiray xukuumadii hore ee talada heysay balse hadda mucaaradka noqday.
Dabaaldegyo lagu soo dhaweynayo doorashada iyo mudaaharaadyo lagu taageerayo siyaasiyiinta gobolka ayaa ka socda magaalooyinka ee gobolka Tigrey kuwaas oo ay ka qeyb qaadanayaan kumanaan ciidamo military ah oo wata darees cusub oo uu ku buufsan yahay calanka maamul-goboleedka Tigrey. Magaala madaxda gobolka ee Makelle ayaa martigelisay dabaaldegyo xoogan, iyadoo garoonka kubadda cagta ee magaalada lagu arkay kumanaan ciidamo ah oo wata hubka fudfudud iyo midka culus oo sameynaya dhoolatus military. "waa lama huraan inaan u dagaalano nabadda gobolkeena oo aan bixino nafhur inta aan awood” ayaa lagu soo qoray barta Facebook-ga ee ciidamada amaanka gobolka Tigrey taas oo qalqal amni oo xoogan sii abuurtay.
"Marka la qiimeeyo xaalka gobolka Tigrey wuxuu u muuqdaa in aanan lagu wajihi karin wax aanan ka ahayn xal military” sidaas waxaa aaminsan generaalka go’aanada khalafsan ku caanbaxay ee Kasaaye Jemeda, kaas oo ah Abaanduule hore oo katirsanaa military-ga Itoobiya, imikana kamid ah la taliyeyaasha sida aadka ugu dhow ra’isul wazaaraha Itoobiya Abey Axmad. Kasaaye ayaa qaba in faragelin military lagu sameeyo gobolka, taladiisana la hoos geeyo xukuumada dhexe kahor inta aysan doorashadaas u dhaqaaqin balse lama garan karo haddii Abey Axmad uu qaadan doono taladaas iyo haddii uu raadin doono kale oo siyaasadeed.